Yaa saxsan Hogaamiyaha Xisbiga Waddani Iyo Xildh. Iid Xassan Cabdi W/Q:Mustafe M. Hassan |
Yaa saxsan Hogaamiyaha Xisbiga Waddani Iyo Xildh. Iid Xassan Cabdi W/Q:Mustafe M. Hassan
Xisbiga Waddani wuxuu ka mid yahay sadexda xisbi qaran ee Soomaaliland ka jira kaasi oo leh dhamaan xeerarkiisa iyo nidaamkiisa u gaar ah. Siddoo kale wuxuu ku leeyahay laamo ama xafiisyo dhammaan gobalada iyo degmooyinka waddanka oo ka kooban garabyo kala duwan sidda garabka dhalinyaradda, haweenka iyo saraakiil u joogo gobal kasta.
Dhacdadii xalay ka dhacday Gabiley ee dhexmartay hogaamiyaha xisbiga Waddani Xirsi Cali iyo Xildhibaan Iiid Xassan Cabdi oo ka tirsan golaha deegaanka Gabiley kana soo baxay xibiga waddani waxaynu u kala qaadi laba qaybood oo saldhig u noqon doona faalladeena..
Qodobka kowaad: Dooda Xildhibaanka
Xildhibaan Iid Xassan Cabid waa xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka Gabiley oo ka soo baxay xisbiga Waddani waxaanu ka mid yahay murashixiintii codkooda uu xisbiga Waddani xisbi qaran ku noqday, Islamarkaana ah saraakiisha ugu saraysa ee xisbiga Waddani u fadhiya Gabiley . si kale haddii aan u dhigno IId Xassan waa summada xisbiga Waddani lagu calaamadsado ee Gabiley u jooga.
Haddaba dooda xildhibaanka ee ah in uu ka warhayo dhaqdhaqaaq xisbigu ka wado Gabiley cidii doonta ha wadee gar ma u leeyahay mise uma laha waa sua’asha meesha taal?
Haddalkii Iid ee bud-dhiga u ahaa doodiisa ee uu xalay kula garnaqsaday Xirsi Cali aan idiin qadimo” inaadeer Xirsow waxaan kuu sheegayaa hogaamiyihii xisbigayagaad tahay, nin masuulana waad tahay magaalada markaad imanayso inaad nala soo socodsiiyo xaqbaan kuugu leenahay”.
hadalka xildhibaanku waa mid miisaankiisa iyo mugiisa leh in masuuliyiintii xisbiga waddani u joogay Gabiley in laga qarsado arimaha xisbigu ka wado Gabiley waayo masuuliyiintaasa waddani iyagaa u qaabilsan halkan oo wacyi kasta iyo hawl kasta oo xisbiga uga fuliya halkan,
Xisbigay u talaa sobobta looga qarinayo arimaha xisbigu ka wada Gabiley xubnahooda halkan u jooga oo inta badan xisbiga halkan ka difaaca oo qaar ka mida xabsiyada la dhigo markay hadlaan.
Qaybta labaad: Dooda Hogaamiyaha Xisbiga Waddani:
Xirsi waa hogaamiyaha xisbiga Waddani Xirsi Cali X. Xassan oo dhawaan la doortay oo miisaan wayn ku leh xisbiga dhexdiisa. Dhawr jeer buu Gabiley yimid oo kulamo gaara la sameeyay dhalinyar Gabiley dagan isagoon la socdsiin xubnaha xisbiga u jooga Gabiley..
Haddaladii doodiisa ee xalay waxaa ka mid ahaa “ dad kulmiye ah oo leh Waddani aan aragno in aan arkaa anigu daruuri baan u arkaa”.
Hogaamiyaha xisbigu xaq ma u leeyahay in kulamo gaar ah sameeyo iyadoo aanay ogayn saraakiishii xisbiga waddani ugu saraysa ee xisbiga Gabiley uga wakiil ahayd?
Guntii iyo gabagabdii waxaan ku soo afmeeray faalladan in saraakiisha Waddani ee Gabiley joogaa ay u xilsaaran yihiiin dhamaan hawlmaaleedka iyo shaqo kasta oo xisbiga Waddani Gabiley ka wado, siddaasoo kalena ay xaq u leeyihiin in madaxda xisbigu soo wargaliyaan xubnahooda Gabiley u qaabilsan hawlaha ay waddaan oo ay fududeeyaan wixii xisbigu Gabiley uga baahan yahay..
Waxaan dareensanahay in muwaadin kasta oo Soomaaliland ahi uu xaq u leeyahay in meeshii uu waddanka ka doono uu u socdaali karo.
Xildhibaan Iid oo ahaa dadkii xisbiga waddani ka caawiyay in uu ku soo baxo oo kamid noqdo sadexda xisbi qaran ee Soomaaliland yeelanayso iyo Xirsi Cali X. xassan oo dhawaan ku soo biiray xisbiga waynu eegi qaabka xisbigu ugu kala garnqo.
Bal aan dhawrno qaabka ay u xaliyaan dhacdaadaas soo kala dhexgashay xisbigooda ..
Mustafe M Hassan.